❝ ကပ်ကြီး သုံးပါးကို ကျော်လွှား နိုင်စေဖို့ မင်းကွန်း ဆရာတော်ကြီး ၏ မိန့်မှာချက် များ ❞ ၁ ။ သူ တ ကာ တွေ လော ဘ ကြီး သော် လည်း မိ မိ က လော ဘ မ ကြီး အောင် နေ ပါ ။ ထို သို့ နေ လျှင် သူ တ ကာ ငတ် မွတ် ခေါင်း ပါး ခြင်း ( ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရာယ် ) ဘေး …
ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကိုယ်တိုင် ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပေါ့ပျက်ပျက်ပြောတဲ့နေသူတွေကို ဒဲ့ပြောပြီ
ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကိုယ်တိုင် ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပေါ့ပျက်ပျက်ပြောတဲ့နေသူတွေကို ဒဲ့ပြောပြီ လက်ရှိအချိန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရောဂါပိုးတွေ့လူနာ ၁၈၈ ရှိပါပြီ စစ်တွေမှာ ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့မြို့နယ် ၁၁ ခုရှိသွားပါပြီ အားလုံးထဲမှာစစ်တွေက အများဆုံးပါ ၁၁၈ ရှိပြီး ၆၃ % ရှိနေပါတယ် ဖြစ်ပွားတဲ့သူ အသက်အရွယ်ဟာ ၁၅-၃၀ မှာ အများဆုံးပါ ၄၈ % ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ပိုဖြစ်ပွားတာ တွေ့ရပြီး ၅၄ % ရှိပါတယ် ရောဂါလက္ခဏာ မရှိပဲ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရသူ ၇၉ % ရှိနေတဲ့အတွက် ၅ ယောက်မှာ ၄ ယောက် ဖြစ်ပါတယ်ဒါ့ကြောင့် လူတွေထဲမှာ ဘယ်သူက ပိုးရှိနိုင်လဲ မသိနိုင်တဲ့အတွက် …
ဖြူဖြူထွေးရဲ့တိုင်ကြားမှုကြောင့်ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာလူကိုယ်တိုင်လာရောက်ဖြေရှင်းခဲ့ရတဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းခန့်ကျော် ဖြူ ဖြူ ထွေး ရဲ့တိုင် ကြား မှု ကြောင့် ရုပ် ရှင် အ စည်း အ ရုံး မှာ လူ ကိုယ် တိုင် လာ ရောက် ဖြေရှင်း ခဲ့ ရ တဲ့ သ ရုပ် ဆောင် မင်း ခန့် ကျော် ပ ရိတ် သတ် ကြီး ရေ ပြီး ခဲ့ တဲ့ ရက် ပိုင်း က ဖြူ ဖြူထွေး နဲ့ ပတ် သတ် ပြီး ဝေ ဖန် တိုက် …
သာမည ဆရာတော် ဘုရားကြီး ချီးမြှင့်ခဲ့သော ပုတီးစိပ်နည်း၊ မသိသူကျော်သွား သိသူယူထား သာမညဆရာတော် ဘုရားကြီး ချီးမြှင့်ခဲ့သော အချိန်အခါ ရွေးနည်းတွင် နေ့တစ်နေ့ကို အချိန် အပိုင်းအခြားအလိုက် ကောင်းသောအချိန်နှင့် မကောင်းသောအချိန် အကြမ်းဖျင်း ခွဲခြားထားပါသည်။ ငွေကြေးဓနနှင့် ဆိုင်သော စန်းနက္ခတ်တို့ ဖြစ်ထွန်းအားကောင်းသော မုဆိုးရွှေအိုးရကိန်း အချိန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် နံနက် ၁၀ နာရီ ၄၉ မိနစ်မှ နေ့လည် ၁ နာရီ ၁၂ မိနစ်အတွင်း တနင်္လာနေ့တွင် နေ့လည် ၁ နာရီ ၁၃ မိနစ်မှ ညနေ ၃နာရီ ၃၆မိနစ် အတွင်း အင်္ဂါနေ့တွင် ညနေ …
သွေးကြော ထုံးခြင်းအတွက် ခရမ်းချဉ်သီး ကုသနည်း
သွေးကြော ထုံးခြင်းအတွက် ခရမ်းချဉ်သီး ကုသနည်း ဒီ ရောဂါ ခံစားသူ အချို့က တခြားကုထုံး တွေအကြောင်း ဖတ်ဖူးထားတာမျိုး ရှိနိုင် ပေမယ့် ဒီခရမ်းချဉ်သီး ကုသနည်းလေး ကိုတော့ သိချင်မှ သိကြ ပါလိမ့်မယ် ။ ခရမ်းချဉ်သီးမှ ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ အကြောင်း သိထား ကြပေမယ့် သွေးကြော ထုံးခြင်းကို ကုသ ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ ကိုတော့ သိရှိသူ အနည်းအကျဉ်း သာရှိပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ ခရမ်းချဉ်သီးမှည့် နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးစိမ်းသုံး နည်း ( ၂ ) နည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ခရမ်းချဉ်သီးစိမ်း ကုသနည်း – …
ကြံရည် ကြိုက်သူများ လုံးဝ ကျော်မသွားသင့်တဲ့ ကြံရည်ရဲ့ ကြောက်ဖို့ ကောင်းလွန်းတဲ့ အာနိသင်များ
ကြံရည် ကြိုက်သူများ လုံးဝ ကျော်မသွားသင့်တဲ့ ကြံရည်ရဲ့ ကြောက်ဖို့ ကောင်းလွန်းတဲ့ အာနိသင်များ ကြံရည်မှာ လူကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများ စွာသာမက ဘက်တီးရီးယား ပိုး မြောက်များစွာ ပါဝင်တာကို စင်္ကာပူ နိုင်ငံ MOH မှ investigation လုပ်ရာမှာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။စင်္ကာပူ နိုင်ငံ စားသောက်ဆိုင် တွေဟာ ကမ္ဘာက စံထား ရလောက်အောင် သန့်ရှင်း ပါတယ် ။ ဆိုင်တွေကိုလည်း ကြပ်ကြပ် မတ်မတ် စီစစ် လေ့ရှိပြီး Grade A , Grade B စသဖြင့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုကို ခွဲခြား ထားပေးလေ့ ရှိပါတယ် …
ခွေးလိုမပြေးနဲ့ ************* *ခေါင်းစဉ်က နဲနဲကြမ်းနေတယ်ထင်ရင် ၃မိနစ်အချိန်ပေးပြီးဖတ်စေချင်ပါတယ်။ယုန်ကလေးကပေးတဲ့ ဒသနတစ်ခါက …မိန်းမအလွန်ကြောက်ရတဲ့ ယုန်ပစ်မုဆိုး တစ်ယောက် ရှိတယ်။ မုဆိုးရဲ့မိန်းမက သူ့ယောက်ျားကို မယုံဘူး။ ရလာတဲ့ ယုန်အရေအတွက်ကို တိတိကျကျ သိနိုင်ဖို့ မိုးလင်းပြီဆိုရင် ယုန်ပစ်ထွက်ဖို့ မြား ဆယ်စင်း၊ ထန်းလျက် ဆယ်လုံး၊ ယုန်ကောက်ဖို့ အမဲလိုက်ခွေးတစ်ကောင် ပြင်ပေးထားလေ့ရှိတယ်။ ဆိုလိုတာက မုဆိုးက လက်အရမ်းဖြောင့်တဲ့သူဖြစ်လို့ မြားတစ်စင်းဆိုရင် ယုန်တစ်ကောင် မှန်လိမ့်မယ်။ အမဲလိုက်ခွေးကို သွားကောက်ခိုင်းပြီး ဆုအဖြစ် ထန်းလျက်တစ်လုံး ကျွေးရမယ်။ မြားဆယ်စင်း၊ ထန်းလျက်ဆယ်လုံးဆိုရင် ယုန်ဆယ်ကောင်ပေါ့။ဒီလိုနဲ့ …တစ်နေ့မှာ ယုန်ပစ်ထွက်လာကြတယ်။ မြားကိုးစင်း၊ ယုန်ကိုးကောင် အထိကတော့ အဆင်ပြေနေတယ်။ နောက်ဆုံးဆယ်စင်းမြောက် မြားကို ပစ်လိုက်တဲ့အခါ ယုန်ကို …
စာဖတ်တာ မေ့သွားမယ့် တူတူ ဘာလို့ စာဖတ် ရတာလဲ?
စာဖတ်တာ မေ့သွားမယ့် တူတူ ဘာလို့ စာဖတ် ရတာလဲ? တစ်နေ့မှာ မြေးအဘိုး နှစ်ယောက် မြစ်ကမ်းဘေးမှာ ထိုင်ပြီး စကားပြော နေ ကြ တယ် ၊ မြေး ဖြစ်သူက အဘိုးကို မေးတယ်… “ဘိုးဘိုး… ဘိုးဘိုး နေ့တိုင်း စာဖတ်တာ.. ဘယ်လောက် မှတ်မိ သလဲ..။ မေ့သွားမယ့် တူတူ ဘာလို့ စာဖတ် ရ တာ လဲ ” အဘိုးက မြေးကို ပြုံးပြပြီး ပြော တယ် ။ “ ဟိုးနားက မီးသွေး ထည့်တဲ့ ခြင်းကြား သွားယူခဲ့ ငါ့မြေး ” မြေးက …
ကိုငှက်ရဲ့သီချင်းနဲ့ The Voice Myanmar Season-3 Blind Audition ကို ပထမဆုံးဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တဲ့ Annie
ကိုငှက်ရဲ့သီချင်းနဲ့ The Voice Myanmar Season-3 Blind Audition ကို ပထမဆုံးဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တဲ့ Annie ပရိသတ် ကြီးရေ… မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားမှု အမြင့်ဆုံး သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲတွေ ထဲက တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ The Voice Myanmar Season-3 ပြိုင်ပွဲ ကြီးကတော့ မနေ့ညက စတင် ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါကြောင့် ထုတ်လွှင့်တဲ့ ရက်ကို ရွှေ့လိုက် ရပေမယ့် Blind Audition ရိုက်ကူးရေး တွေကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ကတည်းက ပြုလုပ် ထားတာ ပါတဲ့နော် ။ မျိုးဆက်သစ် ဂီတ …
ဆိုက်ကားဆရာ(၅၀၀) ကိုလှူဖို့အတွက် ဦးဧရာနဲ့ ဦးကျော်ထူးတို့ရောင်းနေတာလေးတွေ အားပေးခဲ့တဲ့ ယုန်လေး
ဆိုက်ကားဆရာ(၅၀၀) ကိုလှူဖို့အတွက် ဦးဧရာနဲ့ ဦးကျော်ထူးတို့ရောင်းနေတာလေးတွေ အားပေးခဲ့တဲ့ ယုန်လေး ယုန် လေး က တော့ မ ကြာ ခင် မှာ ကျ ရောက် တော့ မယ့် သူ့ ရဲ့မွေး နေ့ အ ကြို အ လှူ လေးအ နေ နဲ့ အ ခြေ ခံ လူ တန်း စား တွေ ဖြစ် တဲ့ ဆိုက် ကား ဆ ရာ တွေ အ တွက် အ ဓိ က လှူ ဒါန်း ပေး …
This Month : 38707
This Year : 360840
Total Users : 655973
Total views : 3298046